Realyourbrainonporn (Daniel Burgess, Nicole Prause) သည်ဂယ်ရီ Wilson အားအသရေဖျက်မှု / နှောင့်ယှက်မှု - သူတို့က Internet Wayback Archive (သြဂုတ်, 2019) တွင်ညစ်ညမ်းသော URL URL အတုများကို 'ရှာဖွေတွေ့ရှိ' - သင့် ဦး နှောက် On Porn
စကားလုံး -“ အစစ်အမှန်” YourBrainOnPorn.com, @BrainOnPorn၊ ဒန်နီယယ်ဘာ့ဂ်နှင့်နီကိုးလ်ပရာ့စ်
၂၀၁၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမတိုင်မီကကျွန်ုပ်သည် Daniel Burgess LMFT အကြောင်းကိုတစ်ခါမှမကြားဖူးပါ။ ရုတ်တရက်, ဘယ်နေရာမှာထဲက Burgess ငါနဲ့ YBOP ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးကိုသုံးတယ်။ Burgess ၏ပစ်မှတ်ထားနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည် တွစ်တာပေါ်မှာ (အောက် တော်တော်များများ @YourBrainOnPorn tweets) နှင့် Facebook ကို ( YBOP Facebook က စာမျက်နှာ၏တဦးတည်း Burgess ရဲ့ Facebook ကိုစာမကျြနှာ, ပြီးနောက် အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအထူးပြုကုသ Facebook စာမျက်နှာ).
၂၀၁၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ / မတ်လတွင်လူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ဒဲန်နီယယ်ဘာ့ဂ်ျသည်ကျွန်ုပ်ကိုရှုတ်ချပြီးအနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့သည်။ မုသာကို set ကို နှင့် သားကောင် - ပါးပျဉ်း၏လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများသူမကနှစ်ပေါင်းများစွာပြသခဲ့သည်။ Burgess ၏မှတ်ချက်များနှင့်တွစ်တာများသည် Prause နှင့်ဆင်တူသည် တီထွင်ပြစ်၏နွှယ်နေတယ်လို့, Burgess နှင့် Prause ပူးပေါင်းနှင့်အနီးကပ်ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ကြောင်းသံသယထွက်ခွာ။ (ပုဂ္ဂလိကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဖွဲ့တစ်ခု၏ကောလာဟလများရှိသည်။ ) သူ့မကောင်းဆိုးဝါး၏ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ငါ Burgess ၏ YBOP ၏ Facebook စာမျက်နှာတွင်ကန ဦး မှတ်ချက်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်နီကိုးလ်ပရပ်စ်ပါဝင်သည် အခြေအမြစ်မရှိသော 2015 သည်ကျွန်ုပ်ထံစာတစ်စောင်ရပ်လိုက်သည် (Burgess ဒီစာကိုဘယ်လိုရခဲ့တာလဲ) ။ YBOP ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာတွင် (ငါဒံယေလ Burgess နှင့်ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့သည့်နေရာ) တွင် Burgess of Screenshots ကမြောက်မြားစွာသောအသရေဖျက်မှုမှတ်ချက်များကိုတင်ခဲ့သည်။ Veမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည် - ၂၀၂၀၊ နို ၀ င်ဘာလအထိဖြစ်သည် Burgess သရေဖျက်မှုမှတ်ချက်များ ရှိနေတုန်းပဲ။
ကျနော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း Prause ရဲ့အမှာစကားပြောကြားသည် တက်လက်သံအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ရပ်တန့်အက္ခရာ။ အဘယ်အရာကိုမျှစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ Prause သည်ခြိမ်းခြောက်မှုနည်းဗျူဟာတစ်ခုအနေဖြင့်အတုအယောင်ဖြစ်သော C&D အက္ခရာများကို (သူမရှေ့နေမဟုတ်ဘဲသူရေးသားခဲ့သည်) ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - အဆက်အသွယ်အတုမရှိသောတောင်းဆိုမှုများ၊ အတုအယောင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတောင်းဆိုမှုများနှင့်လူများကိုနှုတ်ဆိတ်နေခြင်းကိုချီးမွမ်းပါ (Linda Hatch၊ Rob Weiss, Gabe Deem, Gary Wilson, Marnia Robinson, Alex Rhodes, etc)။ C & D သည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောကြောင့်အထောက်အထားခိုင်လုံသောအထောက်အထားမရှိသဖြင့် Prause ၏သားကောင်များသည်များသောအားဖြင့်သူတို့ကိုသတိမထားမိကြပါ။
Burgess အဆိုပါ YBOP Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာငါ့ကိုရှုတ်ချမကြာခင်မှာပဲနှင့် တွစ်တာသူသည်မိမိ၏အမြင်သဘောထားကိုပြသခဲ့သည်။အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအထူးပြုကုသ။ " Burgess အား Staci Sprout နှင့် Forest Benedict တို့၏ ၁၈ ချက်ပြန်ကြားချက်အများစုမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည် Burgess ရဲ့အသရေဖျက် tirade ဖျက်ထားပြီး Burgess သည်လိုင်စင်ရကုထုံး ၆၀၀၀ နှင့် YBOP ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပရိသတ်များရှေ့တွင်သူ၏အသရေဖျက်မှုကိုပြသသောကြောင့်သူ (သူမ၏ညစ်ညမ်းသောမှတ်ချက်များနှင့်ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာသုတေသနများနှင့် ပတ်သက်၍ မထောက်ခံသည့်ပြောဆိုချက်များ) ကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုငါထင်ခဲ့သည်။ မကိုက်ညီသည့်တောင်းဆိုချက်များနဲ့ Daniel Burgess (မတ်လ, 2018) ကကိုယ်ရေးကိုယ်တာတိုက်ခိုက်မှုများ addressing ။
မစ္စစ်ဘာ့ဂ်သည်နီကိုးလ်ပရာယပ်စ်၏မှားယွင်းသောကောင်လေးဖြစ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်ဤဇာတ်လမ်း၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်အကြာတွင်သူတို့ထပ်မံပူးပေါင်းလာကြသည်မှာ (၁) ပါ ၀ င်ခြင်း ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု of YourBrainOnPorn.com အတွက် realyourbrainonporn.comနှင့်, (2) ကို operating လူမှုမီဒီယာအကောင့် ဘို့ စစ်မှန်သောyourbrainonporn.com (အထူးသဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သော Twitter အကောင့် - @BrainOnPorn) ။ တကယ်တော့, ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်း, 2019 အတွက် Daniel Burgess ကိုထိန်းချုပ်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် - ချိုးဖောက် URL ကို www.realyourbrainonporn.com.
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လသြဂုတ်လတွင်ပျက်ကွက်ခဲ့သော“ URL အတု” smear ကင်ပိန်းသို့ကျွန်ုပ်တို့မပြန်မီ၊ Dr. Prause ၏သမိုင်းအကျဉ်းကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။
2013 ဟောင်းတဦး UCLA မှသုတေသီနီကိုးလ် Prause အတွက် ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဂယ်ရီ Wilson က, နှောင့်ယှက် libeling နှင့် cyberstalking စတင်ခဲ့သည်။ (Prause ၏ UCLA စာချုပ်ကိုသက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိသဖြင့်သူသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစပြီးပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှအလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ) သူမသည်သုတေသီများ၊ ဆေးဆရာဝန်များ၊ ကုထုံးပညာရှင်များ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ပြန်လည်နာလန်ထူအတွက်ယောက်ျားတစ် ဦး အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, ထှကျမွောကျရာ Cry, NoFap.com, RebootNation, YourBrainRebalanced သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း - အနည်းငယ်အမည်ပေးရန်။
သူမနိုးနေသောအချိန်များကိုအခြားသူများအားအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်နေစဉ်တွင် Prause သည်မှန်ကန်သောသက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲလိမ္မာပါးနပ်စွာမွေးမြူခဲ့သည်။ သူမက "သားကောင်" ခဲ့ porn ရဲ့သက်ရောက်မှုသို့မဟုတ် porn သုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်ပတျဝနျးကငျြသူမ၏အခိုင်အမာသဘောမတူဖို့မလျှောက်ဝံ့တဲ့သူအများဆုံးမည်သူမဆို၏။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများတန်ပြန်ရန်, YBOP မှတ်တမ်းတင်ရန်အနိုင်အထက်ခဲ့သည် အချို့သော Prause ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများ။ အောက်ပါစာမျက်နှာများကိုစဉ်းစားပါ။ (ဖြည့်စွက်ဖြစ်စဉ်များကျွန်တော်ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတင်ထားရန်လွတ်လပ်မှုမှာမဟုတ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြပါပြီ - ။ Prause ရဲ့သားကောင်များနောက်ထပ်လက်စားချေကိုကွောကျရှံ့ကဲ့သို့)
အပြုအမူသိပ္ပံပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူရှိသည်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု (ပန်းခြံ et al။ , 2016) ပြန်ရုပ်သိမ်း။
နှစ်များစွာကြာနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုသည်နောက်ဆုံးတွင် Burgess ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Prause နှင့်အံသြမိသည်။ မေလ 8, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်, MD တစ်ဦးအသရေဖျက်မှုတင်သွင်း se နှုန်း ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ဆန့်ကျင်။ ဇူလိုင်လ 24, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်ကသူ့အသရေဖျက်မှုတိုင်ကြားချက်ပြင်ဆင် (1) ဆေးစစ်တိုင်ကြားချက်တစ်ခုအန္တရာယ်ရှိတဲ့တက္ကဆက်ပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့, (2) ဒေါက်တာဟီလ်တန်သည်သူ၏အထောက်အထားများလိမ်ခဲ့ကွောငျးမှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များနှင့်ဆင်တူနှောင့်ယှက်၏3သည်အခြား Prause သားကောင်များအနေဖြင့် (9) ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုကျမ်းကျိန်လွှာ (ကိုထည့်သွင်းဖို့ယောဟနျသ Adler, MD, ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, Stacy အညွှန့်, LICSW, Linda Hatch, Ph.D, Bradley အစိမ်းရောင်, Ph.D, Stefanie Carnes, Ph.D, Geoff Goodman, Ph.D, Laila Haddad.)
သငျသညျထင်သူသည်မိမိ chum ဆန့်ကျင် $ 10,000,000 အသရေဖျက်မှုဝတ်စုံ Burgess ရဲ့အသရေဖျက်မှုထကြွလွယ်သောအလျှော့ချခဲ့ပေလိမ့်မည်။ ကြည့်မရဘူး “ Real Brain On Porn” တွစ်တာအကောင့် (အောက်တွင်) ရိုက်ထားသောဇာတ်ကောင်ကိုညစ်ညမ်းစေသောညစ်ညမ်းသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့အပြင် (ထင်ဟပ်ပြသထားသော) အမှားကိုအမှန်၏နီကိုးလ် Prause ရဲ့နွှယ်နေတယ်လို့), Twitter အကောင့်ကိုလည်းအတိအလင်းမှာအနည်းဆုံး3ပြစ်မှုငါ့ကိုစွပ်စွဲ:
ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ Hacking ။
အောက်တွင်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း @ BrainOnPorn ၏ ၄ ရက်ကြာ၊ ၁၀၀+ တွစ်တာသောင်းကျန်းမှုနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်သော“ RealYourBrainOnPorn” ဝက်ဘ်ဆိုက် admin (Burgess ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်) သည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုအလားတူအံ့သြဖွယ်လိမ်လည်မှုများအားအီးမေးလ်ပို့ခဲ့သည်။
လူသိရှင်ကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်မခံနိုင်သောအပြုအမူများနှင့်ပြစ်မှုလူတွေကိုစွပ်စွဲအရေးယူမှုဖြစ်ပါက။ တကယ်တော့အထက်ပါသရေဖျက်မှုထုတ်ပြန်ချက်များ "ယူဆနေကြသည်အသရေဖျက်မှု se နှုန်း"- ငါ (ငါ့အစာအုပ်အနေဖြင့်ရရှိသောမေတ္တာကိုသွားနဲ့ကျွန်မ YBOP ထံမှငွေမရှိသောစေ) recover နိုင်ရန်အတွက်မည်သည့်စီးပွားဖြစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမပြလိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
မှတ်ချက် - RealYBOP (Burgess / Prause) သည်အသရေဖျက်မှုတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ တွစ်တာအမြောက်အများပါ ၀ င်သည့်အခြားအဖြစ်အပျက်များ၊Prause စာမကျြနှာ":
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ၊ စက်တင်ဘာ - NoFap ပါ ၀ င်သည့် CNN အထူးတုံ့ပြန်မှုအရ RealYBOP twitter (Prause & Burgess မှဖွင့်လှစ်ထားသည့်) twitter သည်အဲဖောတ် (Rhodes) ကို Nofap (tweets ၃၀ ခန့်) အားကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခဲ့သည်။
Update ကို (နိုဝင်ဘာ၊ 2019): နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Prause နှင့် RealYBOP twitter တို့၏တိကျသောမီဒီယာလွှမ်းခြုံမှု “ NoFap မှ Porn စွဲမှုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့မှအဲလက်စ်ရော့ဒ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်ပညာရှင်အားတရားစွဲဆိုလိုက်သည်” ၏ Megan Fox ကဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် PJ မီဒီယာ နှင့် “ နို ၀ င်ဘာလတွင်ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်လာသည်”၏ဒိုင်ယာနာ Davison ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် The Post Millennial။ Davison သည် Prause ၏မတူကွဲပြားသောအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဤ6မိနစ်ဗီဒီယိုကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Porn သည်စွဲစွဲလမ်းမှုလော။.
နောက်ဆုံးသတင်းကိုရယူရန် (ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀) အဲလက်စ်ရိုဒ်စ်တင်သွင်းခဲ့သည် Prause ဆန့်ကျင်ပြင်ဆင်ချက်တိုင်ကြားချက် RealYBOP ရဲ့ twitter အကောင့်ကိုလည်းအမည်ပေးထားတယ်။@BrainOnPorn) အသရေဖျက်မှုအတွက်ပါဝငျအဖြစ်။ RealYBOP ၏လိမ်လည်မှု၊ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု၊ The @BrainOnPorn Twitter ကိုအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။ PDF ၏တရား ၀ င်စာရွက်စာတမ်းများ @BrainOnPorn
အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်မှသက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ ပြင်ဆင်ထားသောတိုင်ကြားချက် -
နောက်ဆုံးသတင်းများ (၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လ) တရားရုံး၏စီရင်ချက်များသည် Prause အားကျူးလွန်ခံရသူမဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ်သည်. ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မတ်လတွင်၊ Prause သည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သူမ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလိမ်လည်မှုများ (ငါ့ကိုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲသည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း) ဖြင့်ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ရန်အကြောင်းမဲ့ယာယီတားဆီးမိန့်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ တားမြစ်ထားသည့်အမိန့်တောင်းခံရန် Prause ၏တောင်းဆိုချက်အရသူမကသူမကို YBOP နှင့် Twitter တွင်တင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။မုသားသက်သေခံမှုသည် Prause တွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ) ။ တရားမ ၀ င်စနစ် (TRO) ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းဖြင့်ငါ့ကိုနှုတ်ဆိတ်။ နှောင့်ယှက်ရန် Prause ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိပြည်နယ်ကောင်တီအထက်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်ကိုတားမြစ်သည့်အမိန့်ရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် (အများပြည်သူပါဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု) (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။။ အဂတိလိုက်စားမှုအရတရားရုံးက Prause ကကျွန်ုပ်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနှိပ်စက်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိခြင်းကိုတားဆီးရန်တားမြစ်မိန့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည် ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်သည် Prause အားကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေကြေးပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
Update (၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ) - Gary Wilson သည် RealYBOP URL ကိုယခုပိုင်ဆိုင်သည်။ ကြည့်ပါ - သတိပြုရန်: YBOP သည် www.RealYourBrainOnPorn.com ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုဖြေရှင်းခြင်းတွင်ရရှိသည်
သြဂုတ်လ 21, 2019: @RonSwansonTime (ဖွယ်ရှိ Burgess alias ကို), နီကိုးလ် Prause, NerdyKinkyCommieနှင့် ဒါဝိဒ်သည် Ley မှော်အတုအယောင်ညစ်ညမ်းသော URL များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည် အင်တာနက်ကို WayBack Machine
သြဂုတ်လ 21, 2019 တစ်ဦးတွင် ဖြစ်နိုင်ဖွယ် Burgess alias ကို (@RonSwansonTime - နောက်ထပ် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော "RonSwanson" ပေါ်မှာ) (လိမ်လည်လှည် porn URLs များကိုတစ်ဦးစခရင်ပုံ Tweet လုပ်ခဲ့တည်ရှိဘယ်တော့မှကြောင်းစာမျက်နှာများ) ။ ဒါဟာအောက်မှာညျထငျရှား NerdyKinkyCommie tweet ငါ့ကိုအကြောင်းကို ranting ။ (Nerdy တဲ့ professional trolls ဖြစ်ပါတယ် Prause-ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ အဘယ်သူသည်ငါ့ကိုနှောင့်ယှက်များအတွက်7ရက်ကြာတွစ်တာရပ်ဆိုင်းမှုကိုလက်ခံရရှိ) ။ :
တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ဖွယ် Burgess alias ကိုအဖြစ် outed ခံရပြီးနောက် @RonSwansonTime သူ၏ပါ ၀ င်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပြီးသူ၏တွစ်တာအကောင့်ကို“ ကာကွယ်ထား” ထားကြောင်းထင်ရှားသည် Ron Swanson တကယ် Burgess ဖြစ်ပါသည်) ။ Wayback Machine ပေါ်ရှိ Mormon porn URL များကို“ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း” မှစတင်ခဲ့သော Twitter ချည် (၈/၂၁/၁၉)
ဤတွစ်တာများသည်ကျွန်ုပ် (သို့မဟုတ်အခြားမည်သူမဆို) URLs အတု (YBOP's Wayback Machine archive ပေါ်ရှိမရှိသောစာမျက်နှာများ) ၏တည်ရှိမှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကြားဖူးခြင်းဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ 21st အပေါ်ဖြစ်ရပ်များ၏ကနဦး sequence ကို:
Nerdy ငါ့ကို trolls (ထို 100th အချိန်သို့မဟုတ်ဒါများအတွက်)
၂၀၁၂ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၂၂ ရက် - realyourbrainonporn.com admin သည် Gary Wilson ၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အပေါင်းအသင်းများအားလိမ်လည်ပြောဆိုမှုများပါသောအီးမေးလ်များကိုပေးပို့သည်။ @BrainOnPorn Wilson ကပစ်မှတ်ထားပို့စ်များကို 14 tweets)
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းက trolls နှင့် stalkers သူတို့ရဲ့နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုလာကြသည်။ သြဂုတ်လ 22 တွင် realyourbrainonporn က်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် admin ရဲ့ဒီအီးမေးလ်ကိုဂယ်ရီ Wilson ကမှပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (Burgess URL ကိုပိုင်ဆိုင်သည်နှင့်အမျှ, ငါတို့သည်သူ့ကိုကစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်အောက်ပါယူဆရမယ်။ )
အီးမေးလ်ပို့သည့်အဖွဲ့အစည်းကကျွန်ုပ်ကိုသိပြီး RealYBOP ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းသံသယ ၀ င်သူများအားအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းကိုကောင်းစွာသိသောကြောင့်
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် RealYBOP ၎င်း၏တွစ်တာအကောင့်ရေဖျက်မှုအီးမေးလ်များကိုစလှေတျ (@BrainOnPornကျွန်ုပ်သည် 300 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သော (၃) နှစ်တာကာလအတွင်း“ Mormon porn” URLs (၃၀၀) ကိုကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ခဲ့သည်ဟုအခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ @BrainOnPorn ကကျွန်တော့်ကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့တွစ်တာ ၁၄ ခုထဲကတစ်ခု။
@BrainOnPorn အဆိုပါ Mormonism-porn လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများနှင့်အတူ၎င်း၏စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးတွစ်တာသောင်းကျန်းစတင်ခဲ့သော်လည်းလျင်မြန်စွာသက်ဆိုင်တဲ့အသရေဖျက်မှုများမြောက်မြားစွာသောဖြစ်ရပ်များသို့ဆင်းသက်တော်မူ။ တနင်္ဂနွေ၏အဆုံးအားဖြင့် @BrainOnPorn posted ခဲ့သည် 100 tweets ကျော် ငါ့ကိုပစ်မှတ်ထား။ မကြာခဏငါ၏အတှဲဟာ Thread အတွက်, ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကို tagged ဖူးသူမည်သူမဆိုအောက်မှာ Tweet လုပ်ခဲ့, ဒါမှမဟုတ်ငါ့အတွိများထဲမှ retweeted တဲ့သူတွေကိုနှောင့်ယှက် @BrainOnPorn ။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၂၂ ရက် - တပြိုင်နက်တည်းမှာပင်၊ RealYBOP ၏အီးမေးလ်များနှင့်တွစ်တာများကိုတုပသည့်အကြောင်းအရာများကိုတင်ရန်တွစ်တာအကောင့်အတုတစ်ခုကိုဖန်တီးထားသည်။ https://twitter.com/CorrectingWils1
RealYBOP သရေဖျက်မှုအီးမေးလ်များပို့ခြင်းနှင့် obsessive အတုညစ်ညမ်း URLs များကို tweeting ခဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တစ်ဦးအတုတွစ်တာအကောင့်အတူတူ drivel ပို့စ်တင်ထငျရှား https://twitter.com/CorrectingWils1။ The CorrectingWilson အကောင့်သည်တွစ်တာအကောင့်များနှင့်တူညီသောတွစ်တာ (Gail Dines, Fight The New မူးယစ်ဆေးဝါး၊ John Foubert, SASH123 နှင့် YourBrainOnPorn) တွင်တံဆိပ်တပ်ခြင်းကဲ့သို့တူညီသောတံဆိပ်တပ်ခဲ့သည်
ဘယ်သူဖန်တီးတာလဲလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ဘူး https://twitter.com/CorrectingWils1။ အဆိုပါ trolls အကောင့်ကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့် Twitter ချက်ချင်းကြောင့်ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်:
ဘယ်လိုစိတ်ပိုင်း unhinged ဖြစ်ပါသည် RealYBOP? သို့မဟုတ် RealYBOP ဖြစ်ပါသည် အခြားမာစတာ်ထမ်းဆောင်?
သြဂုတ်လ 22-24, 2019: ဂယ်ရီ Wilson ကတုံ့ပြန်, YBOP အစဉ်အဆက် Mormonism porn URLs များကိုသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာပါရှိသောကြောင့်မုသာစကားကို debunking
ဤသည်၌ သြဂုတ်လ 24, 2019 တွစ်တာချည် ငါ RealYBOP ၏ပစ်မှတ်ထားသောအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း / အသရေဖျက်မှုကိုဖော်ထုတ်ပြီးမည်သူမဆို URL ထဲသို့အတုထည့်သွင်းပုံကိုရှင်းပြသည် အင်တာနက်ကို Wayback စက်။
ဒါကလူငယ်တိုက်ခိုက်ပုံ2နှစ်အတွင်းကြိုးကိုင်နှင့်အထက်ကရှင်းပြသည်အဖြစ်သြဂုတ်လ 21, 2019 ပေါ်တွင်ပေါ်လင်းလေ၏။ ဒါဟာ (လည်းမရှိခဲ့ချေစာမျက်နှာများ) ပါဝင်ပတ်သက်လိမ်လည် URLs ကအပေါ်ထားရှိ အင်တာနက်ကို Wayback စက်အချိန်ကိုဖြတ်ပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ရိုက်ချက်တစ်ခု archive ကို (non-အမြတ်အစွန်းအားဖြင့် operated) ။
၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများ၏ဖန်သားပြင်များကိုဖမ်းဆုပ်ခြင်းအပြင် Wayback Machine သည်၎င်းကူးယူထားသည့် URL များကိုစာရင်းပြုသည် - သို့မဟုတ် archive ကိုမှမေတ္တာရပ်ခံခဲ့ - ၎င်း၏ site ပေါ်တွင်။ အောက်ပါ link သည် YBOP ကို ​​၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ဖန်တီးခဲ့စဉ်ကသိမ်းဆည်းထားသော YBOP URL ၁၀၀,၀၀၀ အားလုံးကိုရည်ညွှန်းသည် (၎င်းသည်တင်ရန်ခဏကြာသည်) ပထမ (စာမျက်နှာ ၂၀၀၀ အနက်မှ ၃ မျက်နှာ) တွင်“ Mormon porn ။ ပထမစာမျက်နှာ ၃ ခုမှဥပမာအချို့ -
“ Mormon porn” URLs များသည် Wayback Machine Archive တွင်သာတည်ရှိသည်။ သူတို့ကိုအသရေဖျက်ရန်ရိုးရှင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်တွင်သူတို့လုံးဝမပါဝင်ခဲ့ပါ။ (အကျိုးဆက်အားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၊ အကြောင်းအရာများလုံးဝမရှိခဲ့ပါ) ။
အဆိုပါအတုအယောင် Wayback archive ကို "porn" လင့်များ "စာမျက်နှာမတွေ့ရှိ" စာမကျြနှာမှလွဲပြီးဘယ်နေရာမှာသွားပါ အဆိုပါ Wayback စက်ပေါ် (404 စာမျက်နှာများ) ။ ဤသည်မှာတရားဝင် Wayback archive ကိုလင့်များအစားဝက်ဘ်စာမျက်နှာအကြောင်းအရာ screenshots များသွားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တည်ရှိဘယ်တော့မှကြောင်းဖွင့်လှစ်မည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့ကြိုးစားပါ။ အဆိုပါ Mormonism porn URL များကိုမဆိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ သငျတို့သရလိမ့်မယ်အားလုံးတစ်ဦး "စာမျက်နှာမတွေ့ရှိ" စခရင်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ တည်ရှိဘယ်တော့မှမ။
ကျပန်း Mormon Porn URL ၏ဥပမာတစ်ခု - https://www.yourbrainonporn.com/relevant-research-and-articles-about-the-studies/critiques-of-questionable-debunking-propaganda-pieces/is-nicole-prause -influenced-by-the-porn-industry / - မော်ကွန်းတိုက်ရှိ URL အတုများ၏“ မှတ်တမ်း”
2017 ကနေအထက် URL ၏ Wayback စခရင်ပုံ (YBOP ၏ပုံကိုယင်း၏အဟောင်း version ကိုသတိထားမိ):
နောက်ထပ်ဥပမာအားစာမကျြနှာကိုမော်ကွန်းတင်ပြီးဘယ်တော့မှခဲ့သည် says: https://web.archive.org/web/2017*/http://www.yourbrainonporn.com//milf-by-a-cottonwood-tree-at-age-43 /
လူအားလုံးတို့သည် Mormonism porn URLs များကိုကိုယ်တိုင်တစ်ဦး trickster နေဖြင့်ဖြည့်စွက်, အတုဖြစ်ကြသည်။
အတိတ်မှတရားဝင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော YBOP စာမျက်နှာသည် https://web.archive.org/web/20150412200603/http://www.yourbrainonporn.com/age-40s-brain-fog-cured-forever-no -morex- ပရဒိသု
ရိုးရှင်းသော: ကတစ်ကယ့်စာမျက်နှာ၏စခရင်ပုံဆှဲလျှင် Wayback စက် URL ကိုသာအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါသည် အကြောင်းအရာနှင့်အတူ"စာမျက်နှာမတွေ့ပါ" (၄၀၄) အမှားတစ်ခုကိုဖန်သားပြင်တစ်ခုဆွဲလိုက်လျှင်မဟုတ်ပါ။
သြဂုတ်လ 22-24, 2019: မည်သူမဆိုအဆိုပါ Wayback စက်သို့အတု URLs များကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်သက်သေပြရန်အတွက်, ငါ YBOP အဘို့ပြု
RealYBOP သည်တွစ်တာများစွာဖြင့်မှားယွင်းသောပြောဆိုမှုများကို URL အတုများအား Wayback Machine ထဲသို့ထည့်သွင်း။ မရပါ။ ဒီတော့ငါလုပ်ခဲ့တယ် (ငါ့ရဲ့ techie သူငယ်ချင်းအနည်းငယ်လောက်) ။ “ Wayback Machine အသုံးပြုခြင်း” စာမျက်နှာ ဤနေရာတွင်တည်ရှိသည် ညွှန်ကြားချက်များကိုပေးစွမ်းသည်။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
ငါ Wayback စက်မှစာမျက်နှာများကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါသလား?
On https://archive.org/web တိကျတဲ့စာမျက်နှာကိုတစ်ကြိမ်သိမ်းရန်“ Save Page Now” အင်္ဂါရပ်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤသည်သည်လက်ရှိတွင်မည်သည့်အနာဂတ် crawls များတွင် URL ကိုထည့်သွင်းနိုင်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့၎င်းစာမျက်နှာထက် ပို၍ မသိမ်းဆည်းနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်စာမျက်နှာများစွာ၊ လမ်းညွှန်များသို့မဟုတ်ဆိုဒ်များတစ်ခုလုံးကိုမသိမ်းဆည်းပါ။
ဒါနဲ့ထံသို့ ဝင်. archive.org/web ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်“ yourbrainonporn.com/testing-can-random-people-insert-links” ရှိစာမျက်နှာတစ်ခုကို archive ပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်၊ Wayback Machine သည်ဤအရာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် - https://web.archive.org/web/20190515000000*/ http://www.yourbrainonporn.com/testing-can-random-people-insert-links ။ Wayback Machine တွင်သိမ်းထားသော YBOP URL အတုများ၏မျက်နှာပြင်ပုံ။
“ YBOP” Mormon porn URLs အားလုံးကဲ့သို့ပင်“ page not found (404)” အမှားတစ်ခု၏ screenshot ကို Wayback Machine သို့သိမ်းဆည်းထားသည်။
https://web.archive.org/web/20190801000000*/http://www.yourbrainonporn.com/cyberstalkers-on-twitter/: ငါကိုလည်း Wayback စက်သို့အခြားသောအလွန်သက်ဆိုင်ရာအတု URL ကိုဖြည့်စွက်
Wayback Machine ထဲသို့ URL အတုများထည့်သွင်းထားသောကျွန်ုပ်၏သက်သေအထောက်အထားများကိုလျစ်လျူရှုပြီး RealYBOP က၎င်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါဟု ဆက်၍ ပြောကြားခဲ့သည် -“ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာပြီးသားကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပါမှတ်တမ်းတင်":
RealYBOP သည်ထိုငြင်းပယ်ခံရသည့်ဂါထာကိုတနင်္ဂနွေနေ့များတွင် tweets များစွာဖြင့်ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး
သြဂုတ်လ 23-24, 2019: တစ်ခုကအမည်မသိမဟာမိတ်များ၏ Wayback စက် archive ကိုသို့အတု URLs များကိုဖြည့်စွက် စစ်မှန်သောYourBrainOnPorn.com
URL အတုများကိုသက်သေပြရန်မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုတွင် မပေးနိုင် ၀ က်ဘ်စက်ထဲသို့ထည့်သွင်းပါက RealYBOP သည် RealYBOP ၏မော်ကွန်းတင်ထားသော URL ၁၁ ခု - https://web.archive.org/web/*/www.realyourbrainonporn.com/* တွင်မျက်နှာပြင်ရိုက်ချက်ကိုတွစ်တာတွင်တင်ခဲ့သည်။
အမှားကြီး။ အမည်မဖော်လိုသူတစ် ဦး သည် URL အတုနှစ်ခုထည့်သွင်းထားကြောင်းမဟာမိတ်တစ် ဦး ကပြောပြပါ စစ်မှန်သောမင်းbrainonporn ပိုင်ဆိုင် Wayback မော်ကွန်းတိုက်:
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော "မဖြစ်နိုင်" ၏ Screenshot ။ (ဒီဟာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့ 'ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာ' ကဘယ်သူလဲ။ )
မော်ကွန်းတင်ထားသောအတု၏မျက်နှာပြင်ပုံ စစ်မှန်သောyourbrainonporn စာမျက်နှာ - https://web.archive.org/web/*/http://www.realyourbrainonporn.com/we-are-terrible-people
RealYourBrainOnPorn ၏မှားယွင်းသောယုတ္တိဗေဒအား အသုံးပြု၍ Wayback Machine သည်၎င်းကိုသိမ်းဆည်းထားပါက“ RealYourBrainOnPorn သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောသူများ” URL ကို၎င်းတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်အမှန်ဖြစ်ရမည်။
နောက်တဖန်, ငါသည်အထက်ပါဆန္ဒပြပွဲနှင့်အတူဘာမှရှိခဲ့ (သို့သော်ကြောင့် Hilary ဖြစ်ပါတယ်) ။
အထက်ပါအထောက်အထားများကိုတုံ့ပြန်မှာတော့ပုံမှန်အသရေဖျက်မှုစမတ်ဖုန်းချ ထား. , URLs က WayBack archive ကိုသို့ထည့်သွင်းမရနိုငျသောတူညီ disproven မုသား tweeting ရပ်တန့်ကြလိမ့်မယ်။ သို့သော် @BrainOnPorn ဝေးပုံမှန်ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက် ငါအထက်တွင် Tweet လုပ်ခဲ့, @BrainOnPorn ငါ့ကိုအပေါ်သူ၏ unhinged နှင့်အသေရေဖျက်တိုက်ခိုက်မှုမှ 60 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို tweets ကဆက်ပြောသည်။
သြဂုတ်လ 22-25, 2019: လှည့်ကွက်များက "Mormon porn URLs" ကိုပထမစာမျက်နှာ ၃ ခု (YBOP ၏မော်ကွန်းတင်ထားသည့်စာမျက်နှာ ၂၀၀၀ အနက်မှ) တွင်သာမည်သို့စုစည်းနိုင်ခဲ့သနည်း။
ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုက်ဘာလှည့်ကွက်များသည်“ Mormon porn URLs” ကိုပထမစာမျက်နှာသုံးခု (YBOP ၏စာမျက်နှာ ၂၀၀၀ အနက်မှ) တွင်အတူတကွစုစည်းစေသည်။ သူ / သူသည်နှစ်ဆကျစ်ဆစ်ကိုတင်ခဲ့သည် (//) ညစ်ညမ်းသော URL URL အတုများထဲသို့။ WayBack စက်မော်ကွန်းတိုက်သည် URLs များကိုအက္ခရာစဉ်ဖြင့်စီစဉ်သောကြောင့်အပိုသင်္ကေတပါသည့်ညစ်ညမ်း URL များသည်သာမန် URL များ (အက္ခရာသို့မဟုတ်စာလုံးအရေအတွက်ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်သည်) အထက်တွင်ပေါ်လာသည်။ ဤတွင် YBOP မှရှာဖွေထားသော URL နှင့်အတုမှတ်ထားသော URL အတုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
Wayback Machine ရှိတရားဝင် YBOP URL - http://www.yourbrainonporn.com/ကြီးမားသော-စာရင်း-အကြံပေးချက်များ-လှည့်ကွက်
Wayback Machine ရှိ YBOP URL အတု - http://www.yourbrainonporn.com/// Mormonism-အမျိုးသမီးတစ်ဦး-ရှင်းလင်းသော
အဆိုပါ Wayback စက်ထဲသို့ထည့်သွင်းသော trickster URLs များကိုအနည်းငယ်၏မျက်နှာပြင်ပုံ:
တရားဝင် URL များ၌တစ်ခုတည်းသောတန်ပြန်မျဉ်းစောင်းတစ်ခုသာပါ ၀ င်သောကြောင့်ဤဖန်သားပြင်သည် Wayback“ porn URLs” သည်လိမ်လည်မှုဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုသည်။
ဟေ့ @BrainOnPorn သင် porn URLs များကိုအစစ်အမှန်ပြောသည်အခိုင်အမာကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူ၏နာမကိုအဘယျသို့ရခဲ့သလဲ yeah အိုး, သင်နာမည်တစ်ခုပေးခဲ့ပါဘူး။
သြဂုတ်လ 26, 2019: ပါဝင်တဲ့ဂယ်ရီ Wilson ကပစ်မှတ်ထား4tweets ကျော်တစ်ဦး 100 ရက်ကြာသောင်းကျန်း @BrainOnPorn ရေးသားချက်များခုနှစ်တွင် (များစွာကို အသရေဖျက်မှု se နှုန်း).
အဆိုပါမိတ်ဆက်ခြင်းအတွက်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း @BrainOnPorn တစ် 100 ရက်ကြာတွစ်တာသောင်းကျန်းစဉ်အတွင်းဂယ်ရီ Wilson ကပစ်မှတ်ထား4tweets ကျော်တင်ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးတဦးတည်းအသေရေဖျက်ကြေညာချက်တွင်ပါရှိသောနီးပါးတိုင်း @BrainOnPorn tweet (အများဆုံးအများအပြားပါရှိသော) ။ အဲဒီအစား RealYBOP အခြေအနေတွင်ထဲကကတခြားမှတ်ချက်များအောက်မှာ posted tweets အပါအဝင်, ဒီမှာ 100 + tweets ပို့စ်တင်ထက်, သြဂုတ်လ 22-26 အကြားငါ့ကိုပစ်မှတ်ထားအပေါငျးတို့သ @BrainOnPorn tweets ကြည့်ဖို့ဒီ link ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု: သြဂုတ်လ 100-22 ထံမှဂယ်ရီ Wilson ကပစ်မှတ်ထား 26 RealYBOP tweets ကျော်။ အများစုမှာ RealYBOP အားဖြင့်အသရေဖျက်မှုမဆံ့။
ကို "ဦးနှောက် Porn တွင်" တွစ်တာအကောင့်အားဖြင့်ကောက်ယူဇာတ်ကောင်-impugning စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအပြင်, Twitter အကောင့်ကိုလည်းအတိအလင်းမှာအနည်းဆုံး3ပြစ်မှု (အောက်တွင် screenshots များ) ၏အကြှနျုပျကိုစွပ်စွဲ:
လူတို့အားလူအများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ / ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူများ၊ အကယ်၍ ခုံရုံးသည် RealYBOP ၏ (Burgess / Prause) လုပ်ရပ်များဟုမှတ်ယူပါက“အသရေဖျက်မှု se နှုန်းပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားဖြစ်ပျက်စီးမှုများကိုဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ RealYBOP ၏ (Burgess / Prause) လုပ်ရပ်များအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖွင့်ထားသောကုစားနည်းများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါသည်။
အသရေဖျက်မှုအတွက်ပါဝငျများစွာ RealYBOP tweets ထံမှယူအနည်းငယ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဥပမာ:
အားလုံးအထက်ပါ mirror ကိုမုသာစကားကိုနီကိုးလ် Prause မရေမတွက်နိုင်သောအကြိမ် posted ထားပါတယ်။ (ဤစာမကျြနှာမြားက Prause ၏လိမ်လည်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုနှင့်ငါ့တုံ့ပြန်မှုများပါ ၀ င်သည်။ ) အားလုံးသည် Prause စာမျက်နှာများတွင်ဖော်ပြထားသောကြောင့်အသရေဖျက်မှုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုစီအတွက်အချိတ်အဆက်များနှင့်အတိုချုပ်တုံ့ပြန်မှုများပေးပါလိမ့်မည်။
ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုသည်ဤလိမ်လည်မှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပျံ့နှံ့စေခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းသူသည်ဘယ်သောအခါမျှစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများကိုတစ်ခါမျှမပေးခဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုဘယ်တော့မှအဆက်အသွယ်မပြုသောဂျာနယ်လစ်များ၏ဆောင်းပါးအချို့သည်“ ပါမောက္ခ” အပါအ ၀ င်ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးဖြင့်မှားယွင်းစွာကိုးကားခဲ့သည်။ ဒါသူတို့ရဲ့အမှားပဲ။ Prause ၏နှောက်ယှက်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောစာမျက်နှာ၏ဤအပိုင်းသည်ပင်ပန်းသောမှားယွင်းမှုကိုဖော်ထုတ်သည်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - Prause မဟုတ်မမှန်ဂယ်ရီ Wilson ကမိမိအအထောက်အထားများအတုမှုများရှိနေကြောင်းသိရသည်။
2) မိမိအကောင့် porn နှင့်အတူ hacked ခဲ့သည်လိမ်
Prause မဟုတ်မမှန်သူမကကျွန်မတောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်ကဆုံးမသွန်သင်ဘယ်တော့မှကြောင်းအခိုင်အမာထားပြီးမသာနှင့် ဒါဝိဒ်သည် Ley ငါ SOU ကနေအလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတယ် သူမသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ထားသောကျွန်ုပ်၏ပစ်ခတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုပင် Prause ရေးသားခဲ့သည်။ SOU ရှေ့နေများပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြရတယ်! ကြည့်ပါ - Nicole Prause & David Ley သည် Gary Wilson အားတောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်မှမောင်းထုတ်သည်ဟုဆိုသည်.
သူမ၏ညစ်ညမ်း website ကိုဆောင်းပါးနှင့် Quora အပေါ်, Prause မဟုတ်မမှန်တောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်ကငါ့ကိုပစ်ခတ်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားသညျ့, ငါ့အလုပ်အကိုင်မှတ်တမ်းများတည်းဖြတ်ရန်မိတ္တူ posted (link ကိုအထက်ကြည့်ပါ) နှင့်သိလျက်။ သူမကသူမ၏ Quora ဆောင်းပါးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထိုနေ့တွင်, Prause အားလုံးသူမ၏အသေရေဖျက်အပိုင်းအစတစ်ခု link ကိုပါဝင်တဲ့ငါ့ကိုအကြောင်းကိုတစ်ဆယ်ထက်ပိုသိက္ခာနှင့် untruthful မှတ်ချက်များတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ဆောင်းပါးများနှင့် Quora မှတ်ချက်များ Tweet လုပ်ခဲ့။ ဤသည်၌ဖြစ်ပေါ် Prause အပြီးအပိုင်နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ငါ့ကို defaming များအတွက် Quora ကနေတားမြစ်ပိတ်ပင်ခံနေရနှင့် Prause ရဲ့ Liberos တွစ်တာအကောင့်ကို Twitter စည်းကမ်းများချိုးဖောက်ဘို့ဆိုင်းငံ့ခံရ.
ငါနှစျကွိမျအပေါ်တောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်ကသင်ပေးတယ်။ ငါသည်လည်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုတစ်ဦးကျြောကာလအတှငျးကအခြားကျောင်းများ၏နံပါတ်မှာခန္ဓာဗေဒ, ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်ရောဂါဗေဒဆုံးမသွန်သင်ခြင်း, အော်ရီဂွန်နှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားနှစ်ဦးစလုံး၏ပြည်နယ်ပညာရေးဦးစီးဌာနတို့က, ဤဘာသာရပ်များသင်ကြားရန်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
4) ကျွန်တော်တို့ကိုနှောင့်ယှက်ရပ်တန့်ဖို့ ACLU ခြင်းဖြင့်အားကြားပြောလေ၏
မဟုတ်ပါ။ အောက်ပါ“ Ron Swanson” အပိုင်းတွင်ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း၊ 21 ဇွန် ၂၁ တွင် RealYBOP သည် California တောင်ပိုင်းကိုပါ ၀ င်ခဲ့သည် ACLU ငါ၏အကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု Prause နှင့်အတူ (Nicole Prause LA မှာနေထိုင်သည်) ။ SoCal ACLU ရှေ့နေတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရှေ့နေများထံသို့ထူးဆန်းသောစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့သည် RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများက ငါ့ကိုနှင့် YBOP ရှုတ်ချပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ SoCal ACLU ရှေ့နေသည် ၀ ါကျတစ်ခုတည်းကိုသာတုံ့ပြန်ခဲ့သည် ငါ၏အ 8-စာမျက်နှာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ရပ်တန့်အက္ခရာ RealYBOP နှင့် Nicole Prause သို့ (ပါ ၀ င်သည့်ဝါကျကိုအခြေအနေမှဖယ်ထုတ်ပြီး SoCal ACLU မှတလွဲဖော်ပြခဲ့သည်) သို့။ ACLU စာသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အငြင်းပွားမှုနှင့်ဘာမှမသက်ဆိုင်ပါ။ RealYBOP သည် SoCal ACLU အားတွစ်တာများမှတလွဲဖော်ပြရန် RealYBOP အတွက်မဆီလျှော်သောမသင့်လျော်သောစာတစ်စောင်ကိုထုတ်လုပ်ရန်မည်သို့ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်ကိုနားလည်ရန်မလွယ်ကူပါ။ (မှတ်ချက် - တရား ၀ င်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတောင်းခံရန်အတွက် National ACLU ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ) အောက်ခြေမှတ်ချက် - Daniel Burgess နှင့် Nicole Prause တို့ကိုတရားစွဲဆိုထားခြင်းသည်ဆီလျှော်မှုမရှိသော ACLU စာတွင်ထိခိုက်မှုမရှိပါ။
5) နောက်ယောင်ခံဘို့များစွာသော FBI ကနှင့်ရဲအစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်
ငါမည်သူမဆိုသွားရမည်ဖူးဘူး။ အခြား tweet ခုနှစ်, RealYBOP ငါပြောဆိုထားသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြိုးသမီးမြားသွားရမည်။ ဤသည်မုသားအသရေဖျက်မှုဥပဒေ နှုန်း se ။
Prause ခဲ့ အက်ဖ်ဘီအိုင်မှငါ့ကိုသတင်းပို့အကြောင်းကိုလဲလျောင်း နှင့်အခြား ရဲတပ်ဖွဲ့အာဏာပိုင်များ အပြေး6နှစ်ပေါင်း။ Prause လည်းအကြိမ်ကြိမ် FBI ကမှ NoFap တည်ထောင်သူအလက်ဇန္ဒား Rhodes သတင်းပို့အကြောင်းကိုလိမ်ထားသည်။ Rhodes နဲ့ကျွန်မနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးတင်သွင်းတင်သွင်း FOIA တောင်းဆိုချက်အရ Prause အစဉ်အဆက်ကိုအနာမည်အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် FBI ကရှာဖွေအတူ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း FOIA သူမကဒီအကြိမ်ပေါင်းများစွာ Tweet လုပ်ခဲ့ထားပြီးသော်လည်း, Prause တစ်ဦးကို FBI အစီရင်ခံစာတင်သွင်းဘယ်တော့မှမူကြောင်းကိုထင်ရှားနှင့် FTND Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာဤတူညီသောပြောဆိုချက်ကို posted (ဤအပိုင်းကိုကြည့်ရှု မေလ 30, 2018: Prause မဟုတ်မမှန်သိပ္ပံလိမ်လည်မှု FTND စွပ်စွဲဖြင့်, သူသည်နှစ်ကြိမ် FBI ကမှဂယ်ရီအစီရင်ခံခဲ့သည်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်) ။ စာရွက်စာတမ်းများအတွက်ဤစာမကျြနှာကိုကြည့်ပါ:
နိုဝင်ဘာလ 2018: FBI က) နီကိုးလ် Prause ဂယ်ရီ Wilson ကတခုတခုအပေါ်မှာ FBI ကအစီရင်ခံစာဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုလိမ်လည်သည်ဟုအတည်ပြု။
ဒီဇင်ဘာလ 2018: FBI ကနီကိုးလ် Prause အလက်ဇန္ဒား Rhodes အပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုလိမ်လည်သည်ဟုအတည်ပြု။
ကျနော်တို့ Prause တစ်ဦးကို FBI အစီရင်ခံစာ (FBI ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုလဲလျောင်းများအတွက်) သူမ၏အပေါ်တရားစွဲဆိုသိရပြုပါ: ဒီဇင်ဘာလ 2018: ဂယ်ရီ Wilson ကနီကိုးလ် Prause တခုတခုအပေါ်မှာ FBI ကအစီရင်ခံစာဖိုင်များကို။
6) ကျွန်တော်တို့ကိုအသေခံခြိမ်းခြောက်မှုများပို့ပေးကြောင်း antisemitism အားပေးအားမြှောက်
နှစ်ဦးစလုံးသည်မုသာဖြစ်ကြ၏။ နောက်တကြိမ်, RealYBOP ဖြစ်စေအခိုင်အမာမရှိစာရွက်စာတမ်းများပေးပါသည်။ မဟုတ်မမှန်သေမင်းခြိမ်းခြောက်မှုများစေလွှတ်တော်မူသောဖျောပွသရေဖျက်မှုဥပဒေ နှုန်း se ။
antisemitism သို့မဟုတ်အဖြူအာဏာသည်ငါတကယ်တော့တစ်ဝေးကျန်ရစ်လစ်ဘရယ်များနှင့်တစ်ဦး၏အလွန် antithesis ဖြစ်ကြောင်းကိုအမှန်တရားများအတွက်, ဒီအင်တာဗျူးကိုနားထောင် "အဖြူ supremacist ။ ": porn သိပ္ပံနှင့်သိပ္ပံ Deniers (Wilson ကအတူအင်တာဗျူး)။ ကလူအမည်များကိုခေါ်ဆိုခြင်း (နှင့်ထို့နောက် "အသင်းအဖွဲ့များကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့" တည်ထောင်ရန်ကြိုးစားနေ) ကိုညစ်ညမ်းဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ် ယူ. မသွားနိုင်သောသူတို့၏အမျိုးအအကြိုက်ဆုံးနည်းဗျူဟာကြောင်းသတိပြုပါ။ ငါနှင့်အခြားသူများအားအကြောင်းမဲ့ပြီများစွာတိုက်ခိုက်မှုအချို့မှတ်တမ်းတင်မယ့်စာမျက်နှာကိုဤကဏ္ဍများမှာကြည့်ရှိသည်:
၂၀၁၉ သြဂုတ်၊ :ဂုတ်လအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ်ခတ်မှုနှစ်ခုဖြစ်သည့် (El Paso & Dayton) နီကိုးလ်ပရပ်စ်နှင့်ဒေးဗစ်လိုင်တို့သည်ဂယ်ရီ Wilson၊ YBOP နှင့် Nofap တို့ကိုအဖြူရောင်အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့်နာဇီတို့၏ဆက်သွယ်မှုကိုကြိုးစားကြိုးပမ်းကြသည်။
သြဂုတ်လ 26, 2019: @BrainOnPorn မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်၎င်း၏ ၁၀၀+ အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ twitter လှောင်ပြောင်မှုကိုတရားမျှတစေသည် RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများက အကြိမ် 100's-1000 ရဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့နေကြသည် YBOP အပေါ်
@BrainOnPorn သည် YBOP မှ RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများအားအကြိမ်ပေါင်းထောင်ချီ။ ဖော်ပြခဲ့သည်ဟုဆိုကာသူ၏ ၁၀၀+ အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတွစ်တာကိုပြင်းထန်စွာအပြစ်တင်ခဲ့သည်။ YBOP တွင်စာမျက်နှာ ၁၂၀၀၀ ပါ ၀ င်ပြီး porn နှင့်ပတ်သက်သောအရာများ (လေ့လာမှုများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဆောင်းပါးဆောင်းပါးများ၊ ဝေဖန်မှုများ၊ ဆန်းစစ်ခြင်းများစသည်တို့) အတွက်ရှင်းလင်းရေးစင်တာဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်“ ကျွမ်းကျင်သူများ” ၏ဖော်ပြချက်များစွာပါ ၀ င်သည်။ သို့သော် RealYBOP ၏နံပါတ်များသည်ပုံပျက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်တည်ဆောက်ရန်အလွန်အမင်းပုံကြီးချဲ့ထားသည်။
အဆိုပါ "အမှု" ဝေးပိတ်ထားသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဂူဂဲလ်သည် YBOP စာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီကိုဘာသာစကား ၁၀၀ သို့ဘာသာပြန်ဆိုသောကြောင့် YBOP စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းတွင်တစ် ဦး တည်းပြောဆိုခြင်းသည်စာမျက်နှာ ၁၀၀ ကိုပြန်သွားသော Google search ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တစ်နည်းပြောရရင် RealYBOP ရဲ့နံပါတ်ကို ၁၀၀ နဲ့စားဖို့လိုကောင်းလိုလိမ့်မယ်။ YBOP တွင်အကြိမ်ပေါင်း ၃၉၂ တွင်ပေါ်နေသည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲထားသော“ Michael Seto” ကို အသုံးပြု၍ ဥပမာတစ်ခုပေးပါလိမ့်မည်။
တစ်ဦးကသင့်လျော် Google ရှာဖွေရေး (Michael seto site ကို: yourbrainonporn.com) 103 "Seto" စာမျက်နှာများကိုပြန်လည်ရောက်ရှိဒါပေမယ့်အားလုံးနီးပါးအခြားဘာသာစကားများအတွက်ထပ် YBOP စာမျက်နှာများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ တိကျမှု ရှာဖွေလမ်း, YBOP search engine ကိုသုံးဖြစ်ပါတယ် ပြန်သာ7ဖြစ်ရပ်။ အားလုံး7ပြန် RealYBOP နှင့်နီကိုးလ် Prause နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အငြင်းပွားမှုမှဆက်စပ်စာမျက်နှာများကိုဖြစ်ကြသည်။
သူကတစ်ဦးမာနထောင်လွှားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့်မိုက်ကယ် Seto YBOP အပေါ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ် RealYBOP“ ကျွမ်းကျင်သူ၏” စာမျက်နှာနှင့် YBOP မှကျိန် ဆို. ပူဇော်အများအပြားစာမျက်နှာများရှိပါတယ် RealYBOP နှင့်အတူဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောတရား, RealYBOP ရဲ့ အဆိုပါသုတေသန၏မှားယွင်းစွာတင်ပြ, RealYBOP ၏အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာလူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ညစ်ပတ်ပေရေလှည့်ကွက်.
YBOP တွင်“ Prause” ကိုအကြိမ်ပေါင်း ၉,၇၁၀ တွေ့ရှိရသည်ဟု RealYBOP ၏ပြောဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ Nope ။ ဖြစ်ရပ် ၁၀,၀၀၀ သည် YBOP ကိုစဉ်းစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်ပုံရသော်လည်းစာမျက်နှာ ၆ ခုပါ ၀ င်သည်။1, 2, 3, 4, 5, 6ကျွန်ုပ်နှင့်အခြားသူများကို ၇ နှစ်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
အမှန်မှာ၊ မှန်ကန်သော“ Prause” အတွက် Google ရှာဖွေမှု (prause site: yourbrainonporn.com) စက်တင်ဘာလ 2nd အပေါ်သာ 5,500 ရလဒ်များကို (မ 9,710) ပြန်လည်ရောက်ရှိ။ ထို့အပြင် Google သည်“ Seto” ကိုရှာဖွေသကဲ့သို့ပြန်အမ်းငွေအများစုသည် YBOP စာမျက်နှာများကိုအခြားဘာသာစကားများဖြင့်ပုံတူကူးယူထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဂူးဂဲလ်ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာတစ်ခုမှ (၁၀ ခုတွင် ၈ ခုသည်မိတ္တူပွားများဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာလ, 2018 အတွက် YBOP ကို“ Google Translate” ကိုအသုံးချရန်ပုံစံမချခင် အ စစ်မှန်တဲ့ yourbrainonporn.com တွင်“ Prause” အတွက်ရလဒ်သည် 565 ဖျောပွထားသ ဤအပိုင်းတွင်ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း Prause သည်လိမ်လည်လှည့်စားသောဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှုနံပါတ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်လိမ္မာပါးနပ်သောလှည့်ကွက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုထားသည်။ Prause မဟုတ်မမှန်သူမ၏အမည်အား 35,000 (သို့မဟုတ် 82,000) ကျော်ပုံပေါ်တဲ့ tweet ထဲမှာ YBOP အပေါ်ကြိမ်မလုပ်ပဲ):
အဘယ်ကြောင့်မ YourBrainOnPorn.com ၏ 500 ဖြစ်ရပ်ထက်ပိုမဆံ့ "Prause?" ပထမဦးစွာတစ်ဦးတည်း Prause ရဲ့အပြုအမူတွေ chronicling စာမျက်နှာများ၏သာဓကရာပေါင်းများစွာဆံ့ "Prause ။ " ဒုတိယအချက်အ YBOP 12,000 စာမကျြနှာ (နှင့်စိုက်ပျိုးမှု) အကြောင်းကိုပါရှိသည်။ ဒါဟာအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်သုံးစွဲသူများအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နီးပါးအရာအားလုံးများအတွက် Clearinghouse ပါပဲ။ Prause porn အသုံးပြုခြင်းနှင့် hypersexuality အကြောင်းကိုမျိုးစုံလေ့လာမှုများပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများတဲ့ professional debunker အဖြစ်သူ့ကိုယ်သူဖော်ပြထားတယ်သိရသည်။
"တစ် Google ရှာဖွေရေးနီကိုးလ် Prause "+ ညစ်ညမ်း 37,000 စာမျက်နှာများအကြောင်းကိုပြန်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူမ၏မှကျေးဇူးတင်စကား စျေးကိုအဆမတန်မြှပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီတခုသူမက porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲအကြောင်းကိုသတင်းစာပညာဆောင်းပါးများရာပေါင်းများစွာအတွက်ကိုးကားပါတယ်။ သူမသည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောအများအပြားစာတမ်းများထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ သူမသည်မှန်မှန်တစ်ခုတည်းနှင့်အတူညစ်ညမ်းစွဲ debunked ရှိသည်ဟုဟုဆိုကာ, မီဒီယာအတွက် featured ရဲ့ (အကြီးအကျယ်ဝေဖန်) လေ့လာချက်။ ဒီတော့ Prause ရဲ့နာမညျကိုမလွှဲမရှောင်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့ဆက်စပ်သုတေသနနှင့်သတင်းများကိုများအတွက် Clearinghouse အဖြစ်လုပ်ဆောင်မယ့် site ပေါ်တွင်အများကြီးတက်ပြသထားတယ်။
Prause ရဲ့လေ့လာမှုတွေ YBOP ပေါ်တွင်ပေါ်လာဒါပြုကြမသာ သည်အခြားလေ့လာမှုများထောင်ပေါင်းများစွာ၏, အရာအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့ရည်ညွှန်းအပိုင်းများတွင် "Prause" ကိုးကား။ ဒါ့အပြင် YBOP သူမ၏လေ့လာမှုများ၏အနည်းဆုံး 18 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုမှာအလွန်ရှည်လျားခုနစ်ခု Prause စာတမ်းများ၏ဝေဖန်မှုများနှင့်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် YBOP Prause ရဲ့အလုပ်၏အနည်းဆုံးတစ်ဒါဇင် Lay ဝေဖန်မှုပါရှိသည်။
YBOP လည်းအများအပြားအိမ်ရှင်အဖြစ် သတင်းစာပညာဆောင်းပါးများ ကြောင်းကိုးကားနီကိုးလ် Prause နှင့် YBOP မကြာခဏဒီဆောင်းပါးတွေအတွက် Prause ရဲ့တောင်းဆိုမှုများတုံ့ပြန်မှု။ YBOP လည်း Prause နှင့်သူမ၏အနီးကပ်မဟာမိတ်တို့ကထွက်ထားစကားပြောအချက်များအများအပြား debunks ဒါဝိဒ်သည် Ley (နှင့်ယခု RealYBOP) ။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒီ Prause အကြောင်းကိုမဟုတ်; YBOP ကိုလည်း ဝေဖန်မှုသည်အခြားမေးခွန်းထုတ်စရာသုတေသန porn နှင့်ဆက်စပ်ဘာသာရပ်များအပေါ်။ အားလုံးဝေဖန်မှုပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဟုတ်, အစားသက်သေအထောက်အထား-based.
နောက်ဆက်တွဲ # 1 - အီးvidence ကြောင်း @RonSwansonTime တကယ်ဒံယလေသ Burgess ဖြစ်ပါသည်
“ Ron Swanson” တွစ်တာအကောင့်အတုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ၃ နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်သော်လည်းအကြိမ် ၂၀ မျှတွစ်တာစာတင်ခဲ့သည်၊ မစ္စတာဆွမ်ဆင်သည်မသေနိုင်ပါ။
ဇွန်လ 14, 2019 တွင်ငါ posted အောက်ပါ Twitter ကိုချည် မှနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုတုံ့ပြန် “ RealYourBrainOnPorn” Twitter အကောင့်။ (အမျှ ဒီနေရာမှာရှင်းပြခဲ့၊ RealYBOP ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်လူမှုမီဒီယာအကောင့်များသည်တရားမ ၀ င်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကျူးကျော်ခြင်းများတွင်ပါ ၀ င်နေသည်။ ) ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြုံနေသော“ Ron Swanson” အကောင့်သည်ကျွန်ုပ်၏ချည်ထဲသို့ ၀ င်ပြီးဥပဒေနောက်ခံရှိသည်ဟု ဆို၍ ဥပဒေရေးရာအကူအညီများပေးခဲ့သည်။
“ Ron Swanson's” တွစ်တာကိုအလျင်အမြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လျှင်၎င်းသည်အတုဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငါးဖမ်းလေ့လာရေးခရီးစဉ်ကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါ "Swanson" ဟာ Burgess ဖြစ်တယ်လို့သံသယဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၃ နှစ်အတွင်းမှာတွစ်တာ ၂၀ အကြားမှာ Burgess ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့သူ့ဇနီးသည် CrossFit ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာပါ ၀ င်နေတယ်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းအားကစားဒန်) ။ “ Ron Swanson” ကတွစ်တာတစ်ခုနှင့်အတူ
link ကဒီ NugentTherapy Instagram post ကိုသွားတယ် ရုတ်တရက်ဖျက်ပစ်):
Burgess နှင့်သူ၏ဇနီးသည် CrossFit တွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်မှာလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ။ သူကတောင်ဖန်တီးခဲ့တယ် ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို chronicling Facebook စာမျက်နှာ။ (မှတ်စု: ဘာ့ဂ်စ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအသရေဖျက်ခြင်း၊ လှည့်စားခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်သောစာများပေးပို့ခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ယခုတရားစွဲဆိုခြင်းများသာမကကျွန်ုပ်တို့နှင့်သူနှင့်သူ၏ aliases အွန်လိုင်းအပြုအမူများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။.)
“ Ron Swanson” ၏နက်နဲသောအရာဖြေရှင်းချက်။
RealYBOP သည် SoCal ACLU စာကို Tweet လုပ်သည့်တစ်မိနစ် (ဒီစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည်)“ Ron Swanson” က ၄ ကြိမ်တိုင်၎င်းကိုရေးသည်။ @YourBrainOnPorn။ “ Ron Swanson” အကောင့်ကဇွန်လ ၁၅ ရက်မှာသူတို့ဟာပညာရှိတဲ့အကြံဥာဏ်ပေးတဲ့ tweets တွေဘာမှမရေးခဲ့ပါဘူး။ တွစ်တာလေးခု -
“ Ron Swanson” အကောင့်သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်အထိ“ Ron” သည် Wayback Machine archive တွင်ရှိသော“ Mormon porn” URL အတုများကိုတွစ်တာရေးသားသည့်အချိန်အထိတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့သည်။
Ron Swanson ခဲ့ပြီးနောက် တရားဝင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ဖွယ် Burgess alias ကိုအဖြစ် outed“ Ron” သည်သူ၏တွစ်တာအကောင့်ကို (နောက်လိုက် ၉ ယောက်ဖြင့်) သီးသန့်ဖြစ်စေသည်။
အဘယ်ကြောင့်အတုတွစ်တာအကောင့်ပုဂ္ဂလိက go မလဲ သက်သေအထောက်အထားဖုံးကွယ်ဖို့?